Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Chiiz free mmiri ara ehi ọhụrụ: Microalgae mbụ dabere
Sophie's BioNutrients, ụlọ ọrụ teknụzụ mmepụta nri obodo mepere emepe na-adịgide adịgide, yana Ingredion Idea Labs® innovation center na Singapore, jikọrọ aka iji mepụta cheese mbụ ya dabere na microalgae, nke sitere na mmiri ara ehi microalgae na-adịghị mmiri ara ehi nke Sophie's BioNutrients. Site na vegan, nhọrọ na-enweghị mmiri ara ehi maka cheese na-arị elu na nzaghachi na-arịwanye elu nke ndị ahịa na-achọ maka ihe ndị ọzọ dabeere na osisi, cheese a na-enweghị mmiri ara ehi bụ ihe mgbakwunye a na-atụ anya ya.
Ihe ọhụrụ chiiz a na-etu ọnụ profaịlụ umami na nke na-atọ ụtọ, na-eṅomi cheese Cheddar nke anụ ahụ ma nwee ike ịkpụ ya maka bọọdụ cheese, gbazee na toastie, tinye ya na sanwichi, ma ọ bụ gbanye ya na crackers ma ọ bụ achịcha dị ka ọgaranya na gooey gbasaa.
Ihe ọ bụla mmiri ara ehi nwere ike ime, microalgae nwere ike ime Cheddar
Ndị otu nọ na Sophie's BioNutrients jikọrọ aka na otu ndị ọkachamara nka na Ingredion iji mepụta cheese na-eme enyi. Emebere ya site na iji ntụ ọka protein microalgae, ọ dị ka ụdị ngwaahịa abụọ - cheese na-enweghị mmiri ara ehi na-enweghị mmiri ara ehi na-enweghị mmiri ara ehi na-agbasa.
Nri otu ounce nke chiiz microalgae siri ike na-enye ohere okpukpu abụọ nke B12 kwa ụbọchị. A na-egbutekwa ya nke ọma - ọ dịghị ehi e merụrụ ahụ n'oge usoro ahụ - ma nwee obere ụkwụ carbon.
"Microalgae bụ otu n'ime ihe ndị na-edozi ahụ ma na-edozi ahụ na mbara ala. Taa, anyị egosila akụkụ ọzọ nke ohere na-akparaghị ókè nri a nwere ike inye - mmiri ara ehi na lactose ọzọ na-abụghị cheese nke, ekele maka microalgae, na-enye protein dị elu karịa ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-adịghị mmiri ara ehi dị. Anyị nwere obi ụtọ dị ukwuu maka mmepe a na nri na-enweghị ihe nfụkasị ahụ yana atụmanya nke iri nri ndị ọzọ, "Eugene Wang, Onye-guzobere & Onye isi oche nke Sophie's BioNutrients kwuru.
Ai Tsing Tan, Innovation Director na Ingredion kekwara, "Ka anyị na-emepụta ihe ọhụrụ iji gboo mkpa mgbanwe nke ndị na-azụ ahịa, ọ bụ isi ihe na-elekwasị anya na àgwà ndị dị mkpa maka ịmepụta ngwaahịa na-amasị ndị ahịa. Ụzọ anyị si enweta cheese na-adịghị mmiri ara ehi bụ ịzụlite ya dị ka o kwere mee na cheese na ekpomeekpo na udidi. Ndị ahịa nwere ike ịnụ ụtọ ahụmịhe iri nri vegan nke na-atọ ụtọ, nke a na-ama ama na nke a na-achọsi ike. "
Na-arụ ọrụ iji mepụta nri ga-adigide n'ọdịnihu
Edebere ihe ọhụrụ ọhụrụ a megidere ndabere nke ndị ahịa na-achọsi ike maka usoro mmiri ara ehi dabere na osisi n'ụwa niile. Mmụba nke mmata banyere ọnọdụ anabataghị lactose bụ isi ihe na-ebute ahịa ahịa.
Dabere na ụlọ ọrụ nyocha azụmaahịa mba ụwa, Research and Markets, ahịa cheese cheese zuru ụwa ọnụ bara uru na ijeri US $ 1.2 na 2019 ma na-eche na ọ ga-eru $ 4.42 ijeri site na 2027, na-agbasa na ọnụego uto kwa afọ (CAGR) nke 15.5% site na 2021 ruo 2027.
Sophie's Bionutrients na-emepụta ntụ ọka microalgae na-adịghị agbanwe agbanwe nke a na-akọ site na otu cell microalgae ma na-egbute n'ime ụbọchị atọ na gburugburu ebe echedoro.
Ụdị microalgae nke Sophie's BioNutrients ji bụ US GRAS na European Food Safety Authority (EFSA) kwadoro maka iji dị ka ihe oriri ma ọ bụ mgbakwunye.
Ingredion na-achịkọta ikike nke ndị mmadụ, okike na teknụzụ iji mee ka ndụ niile ka mma. Ingredion agba mbọ imeziwanye nchekwa nri site na omume ị nweta nri na-adigide yana onyinye ngwaahịa emelitere iji kwado nchekwa nri, gụnyere ilekwasị anya na protein ndị ọzọ. Ingredion na-enye nka n'iwepụta ngwaahịa ndị ahịa masịrị n'ịmekọrịta ihe na-esote Sophie's Bionutrients.